China Pasta igwe na Spaghetti akụrụngwa ụlọ ọrụ na-emepụta | JUMP
Pasta na -emepụta pasta na-emepụta pasta nri nhazi ngwa nri mepụtara ma mepụta dabere na ịmịpụta teknụzụ mba ọzọ. Ya akụrụngwa arụmọrụ na oru mma ruru elu larịị nke yiri mba akụrụngwa.
Mmepụta akara si akụrụngwa Efrata, akụrụngwa nnyefe, extrusion ịkpụzi, mmiri ruo mgbe okokụre ngwaahịa ga-agwụ agwụ na otu oge. Usoro mmepụta nwere ike ịmepụta pasta niile, macaroni, tubes gbara gburugburu, tubes square, mbadamba enamel na ngwaahịa ndị ọzọ dịka akụrụngwa inyeaka. Dị ka ebu dị iche iche na ihe inyeaka, ọ nwekwara ike mepụta nri nri dị ịtụnanya dị ka iberibe iberibe na ibe nduku.
Igwe onyinye na ngwa Spaghetti Na-agba ọsọ
Igwekota - ịghasa ebu-Extruder - cutter - Ewepụghị ebu - Hoister - dyer - Hoister - draya - Jụrụ igwe - mbukota igwe
Igwe onyinye na ngwa Spaghetti mmiri:
1. igwekota: Dị ka usoro mmepụta dị iche iche si dị, a na-eji ụdị igwekota dị iche iche eme ihe.
2. Ịghasa ebu: Na-eji moto ahụ dị ka onye na-ebugharị ike iji hụ na ọ na-ebufe ngwa ngwa ma dị mfe.
3. Extruder: Dị ka usoro mmepụta dị iche iche si dị, a na-eji ụdị ndị dị iche iche eme ihe. Mmepụta nwere ike ịbụ site na 100kg / h na 200kg / h. Enwere ike iji ntụ ọka, ntụ osikapa, ntụ ọka, na ntụ ọka mee ihe.
4. Igwe na-ezipụ ikuku: A na-eji ike ikuku nke ofufe na-ebuga ihe ọkụkụ na oven, a na-ahọrọ ndị fan dị iche iche (ma ọ bụ igwe na-ekpo ọkụ) dịka ngwaahịa dị iche iche.
5. Multi-oyi akwa oven: oven bụ ukwuu n'ime electric oven, okpomọkụ na-gbanwee n'etiti 0-200 degrees site akara kabinet, esịtidem anaghị agba nchara abụọ ntupu akpa, mmiri oge nwere ike gbanwee dị ka ọsọ, e nwere atọ n'ígwé, ise akwa, okpukpu asaa Igwe anaghị agba nchara.
Nke gara aga: French fries akụrụngwa
Mkpọ Production Production Line
Ike Swiiti nhazi Machine
Soft swiiti Akụrụngwa
Onwe ya mepụtara biya biya ọhụrụ